गोकुल बाँस्कोटाले भने- ‘७० करोड मात्र होइन ७० अर्ब हान्दिएको हो के फरक पर्छ ? भिडियो सहित — Sanchar Kendra
गोकुल बाँस्कोटाले भने- ‘७० करोड मात्र होइन ७० अर्ब हान्दिएको हो के फरक पर्छ ? भिडियो सहित
काठमाडौं। एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा फेरि एक पटक विवादमा तानिएका छन्। कारण हो उनले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति।
एक कार्यक्रमबिच उनले भने ७० करोड मात्र होइन ७० अर्ब हान्दिएको हो हामीलाई के फरक पर्छ। यो प्रसंग उनले विवादित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणको कुरा निक्लिदा भनेका हुन। जुन सामाजिक संजालमा यतिबेला भाइरल छ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले फेरि एक पटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसो त बाँस्कोटा विवादको पर्यायबाची हुन भन्दा फरक पर्दैन।
उनी जहाँ सम्बोधन गर्न पुग्छन् वा जहाँ माइक समाउँछन्, उनले उरुको उछितो नकाटी हुँदैन्। हुँदा–हुँदा बाँस्कोटाले आफैलाई लागेको आरोपको थप पुष्टि हुने किसिमको अभिव्यक्ति दिएका छन्। जुन सामाजिक संजालमा यतिबेला भाइरल छ।
बाँस्कोटा माथि लाग्दै आएको आरोप सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता र भ्रस्टाचार– जहाँ बाँस्कोटाको प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप छ।
यो प्रकरणलाई थप पुष्टि गर्ने बाँस्कोटा र स्विस कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग भएको भनिएको संवादको अडियो जहाँ खरिद प्रक्रियामा घुस मागेको झन्डै साढे दुई मिनट लामो सार्वजनिक पनि भएको थियो।
तथापि बाँस्कोटाले आप्mनो स्वर नभएको र क्यारिकेचर गरिएको भन्दै उल्टै आरोप लगाउने गरेका छन्। बाँस्कोटाले कारबाही गर्ने भए क्यारीकेचर गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउने गरेका छन् ।
तर तिनै बाँस्कोटाले ७० करोड मात्र होइन ७० अर्ब हान्दिएको हो हामीलाई के फरक पर्छ र भन्दै सार्वजानिक रुपमा बोलेका हुन। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता र भ्रस्टाचारको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा बिचाराधिन छ।
जसको निकास अहिले सम्म निक्लिन सकेको छैन्। तथापि बाँस्कोटाले आरोप लागेपछि भने मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका थिए।
उनले ट्वीटबाट पनि आफूलाई भ्रस्टाचारको आरोप लागेपछि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरि पदमा नरहने भन्दै मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका थिए । त्यस्तै बाँस्कोटाले सोहि कार्यक्रममा उनीहरूको नीजि खाईदिएको हो।
र भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन। उनले उनीहरूको नीजि खाईदिएको भए तिनका परमादेश र अरु सबै शक्ति भएको बेला बाटो हिड्न नदिने, कुट्ने कोर्रा हान्ने थिए भन्दै अनुसन्धान गर्न चुनौति दिएका छन्।
यसरी आरोपित किन ठूलो ठूलो स्वरमा कराईरहेका छन्। अदालतले किन यसको निकास दिँदैन्। बाँस्कोटा निर्दोश भए उन्मुक्ति र दोषि भए कानून बमोजिम कारबाहि किन हुँदैन् रु विभिन्न प्रश्न र शंशय भने पैदा भएको छ। जुन रहस्यको गर्भमा नै छन्।